DP-G901 Beauty facial bed electric beauty bed (မော်တာသုံးလုံး) DongPin သည်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ဆောင်သည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
DP-8322 Hydraulic Massage Bed Product Parameters Item NO.:DP-8322 hydraulic facial bed massage table Dimensions(မီလီမီတာ):183*62*64cm Package:114*66*78cm CBM:0.52CBM GW/NW:50KGS/45KGS Color:Various color avilable Materials:stainless steel, high quality of PVC and sponge,wood,metal Features: 1,any color options of the viynl leather 2.removeble headrest. 3.face hole for ergonomic body positioning 4.angle and height of the headrest/footrest…